China Manicure Kit Pedicure Set Nail Clipper Callus Remover 12 Pieces orinasa sy mpanamboatra | Muran
Ahitana clipper toenail, clipper fantsika, clipper diagonal nail, scissor misy tanjona marobe, trimmer cuticle, tsimpon-tsofina, tsorakazo roa sosona, tweezer volomaso, antsy peeling, fantsika fantsika, fanjaitra mainty sy famongorana tadivavarana Tsorakazo.
fitaovana: hety, fantsika fantsika nipper hoho, v endrika pusher, tweezer, peeling blackhead fanjaitra sy loop remover vita amin'ny vy tsy misy fangarony, 3pcs fantsona fantsika ary earpick vita amin'ny vy karbonika, cuticle trimmer vita amin'ny zinc-aluminium firaka.
Kitika pedika manicure 12 pcs dia miaraka amina tranga tsara sy kanto hiarovana ireo fitaovana maranitra, mora ny manidy na manokatra amin'ny fanidiana tampoka azo antoka.
Manicuring, pedicuring, volomaso volomaso, anti-mony, exfoliating ETC, miaraka amina seta iray ihany ary vita daholo. Fonosina amina tranga tsara sy mora entina, ao anatin'izany izay rehetra ilainao amin'ny manicure anao manokana, fanomezana tsy ampoizina ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy izany.
Ireo set manicure pedicure dia vita amin'ny vy ambony, tsara tarehy, matanjaka ary natsangana haharitra. Ianao dia hahazo ny volanao miaraka amin'ity seta ity sy maro hafa.
Amin'ity kitapo ity dia tsy mila mividy vokatra tokana ianao rehefa maniry ny hoho
Sehatra tokana ho an'ny fitaovana tsirairay, fanidiana zipper ary fijerena mazava ny fitaovana ilainao rehetra
Mora tehirizina sy entina
Toa tsara tarehy ary mifanaraka tsara amin'ny valizinao sy ny poketra misy anao, mora ampiasaina
Azafady mba alaviro ny ankizy fa samy maranitra ny mpanao clipper sy ny pusher.
Loko: asehoy ho toy ny sary
anaran'ny vokatra Nail Manicure Pedicure Set
Toerana niandohana: ZHEJIANG, CHINA
MODELY NO. IZ-S201
Fitaovana: Stainless Steel Accessories
fe-potoana 3-7 andro
Serivisy ho an'ny mpanjifa sary famantarana sy fonosana
Teo aloha: IZLA 7 in 1 Stainless Steel Portable Manicure Set Manicure & Pedicure Kit Professional Nail Clippers Kit Pedicure Care Tools for Travel na Home
Manaraka: Borosin-tsolom-bolo vita amin'ny menmazy 10 pcs 10 borosy
Fitaovana manicure an-trano
Kitapo manicure vita amin'ny kitapo hoditra 17 amin'ny 1 napetraka
IZLA 7 amin'ny 1 Stainless Steel Portable Manicure S ...
15 pcs Manicure Manokana napetraka Pedicure fantsika K ...